I-Xiaomi Mi 8 SE: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
IXiaomi Mi 8 SE: Uluhlu oluphakathi oluphefumlelwe sisiphelo esiphakamileyo
Kule veki inye idatha yokuqala malunga neXiaomi Mi 8 SE yavuza, ifowuni entsha ekumgangatho ophakathi ovela kuhlobo lwesiTshayina, oluphefumlelwe sisiphelo salo nyaka. Uhlobo lwenguqu ethozamileyo yesiphelo esiphakamileyo, esasingaziwa ukuba siyinyani okanye hayi. Kodwa ekugqibeleni iboniswe ngokusesikweni kulo msitho wohlobo lwe China. Ke sele sisazi yonke into malunga nomnxeba.
Njengoko igama layo libonisa, le Xiaomi Mi 8 SE sisixhobo esiphefumlelwe sisiphelo salo nyaka, kodwa isishiya nenkcazo elula kakhulu. Inketho elungileyo kubasebenzisi abakhangela isixhobo esisemgangathweni ngexabiso eliphantsi.
Ifowuni yeyokuqala yosapho olutsha lweXiaomi, inokuba ngumkhwa. Oku asikwazi okwangoku, ukongeza, yeyokuqala ukusebenzisa iprosesa entsha yeQualcomm. Sikushiya kuqala ngeenkcukacha zomnxeba:
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi 8 SE
Ukucaciswa kweXiaomi Mi 8 SE
Uyilo, ngobukho benotshi, kucacile ukuba iphefumlelwe yiXiaomi Mi 8 ikwanikezelwe kulo msitho. Nangona le modeli isishiya sinobunkunkqele ngakumbi kwaye singekho kangako kwiimpawu zobuchwephesha kunemodeli yangaphambili. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
IsikriniI-5.88-intshi ye-OLED ene-19: 9 ratio kunye nesisombululo se-FullHD + (2280 x 1080)
i-ram: 4/6 GB
Ukugcina ngaphakathi: I-64 GB
Ikhamera yangaphambiliI-20 MP
Ibhetri: I-3120 mAh
Inkqubo yokusebenzaI-Android 8.1 Oreo ene-MIUI 10 njengoluhlu lokwahlulahlula
abanye: Isenzwa zeminwe, ukuvulwa kobuso, uhlobo lwe-C C, i-NFC, iBluetooth ...
Ngokubanzi sinokubona ukuba bakhuthazekile kwaye bathathe ezinye zeempawu esizibonileyo kuluhlu oluphezulu. bucala ngasekhohlo IXiaomi Mi 8 SE iya kuba nayo inzwa yeminwe kunye nokuvula ubuso. Iimpawu ezimbini ezifumanekayo kubukho kwimarike.
Kwakhona, ifowuni iba kweyokuqala kwintengiso ukusebenzisa iprosesa ye-Snapdragon 710. Olu lusapho lutsha lweeprosesa zeQualcomm, ezenzelwe uluhlu lweepremiyamu. Ke zingaphantsi kancinci kuluhlu lwama-800 kodwa zingcono kunezo zingama-600. Ke kulindeleke ukuba kwenziwe intsebenzo elungileyo, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
IXiaomi Mi 8 SE ikhethe i-notch, nangona sinokubona ukuba kule modeli isikrini ithatha imilo yoxande ngakumbi. Uyilo lwahlukile, nangona ubheja kwizakhelo ezibhityileyo ngalo lonke ixesha. Akukho nto yothusayo kule meko. Ngelixa ngasemva ikhamera emibini ilindile.
Esi sixhobo inikwa njengefowuni enezinto ezintle ngexabiso elincitshisiweyo. Ngaphandle kwamathandabuzo sisitshixo sayo, esinika intsebenzo elungileyo, amanqaku anamandla ngaphakathi kuluhlu oluphakathi, kunye nexabiso elifikelelekayo. Inketho elungileyo kubasebenzisi abangafuniyo okanye abanakho ukufikelela kwisiphelo esiphakamileyo. Ke kunokuba yifowuni ethengisa kakuhle.
Sifumana iinguqulelo ezimbini zale Xiaomi Mi 8 SE ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, nangona i-RAM ngokwenene ingumahluko phakathi kwezi zimbini. Sinenguqulo ene-4/64 GB kwaye enye ine-6/64 GB. Ke abasebenzisi banokukhetha leyo bacinga ukuba ilungele bona.
Ngokubhekisele kumaxabiso, inguqulelo yefowuni ene-4/64 GB iya kuba namaxabiso nge-1.799 yuan, ezokutshintsha malunga nee-euro ezingama-240. Ixabiso liya kuba phezulu kakhulu xa isixhobo sifika ngokusemthethweni eYurophu, esicinga ukuba siza kufika.
Kwelinye icala sinenguqulo ene-6/64 GB, ethi kule meko ibize kakhulu, njengexabiso layo le-1.999 yuan. Utshintsho zimalunga nee-euro ezingama-265. Kwakhona, kulindelwe ukuba ixabiso layo liza kuba phezulu kakhulu ekusungulweni kwayo eYurophu.
Ukuza kuthi ga ngoku akwaziwa ukuba le Xiaomi Mi 8 SE izakufika nini ezivenkileni. Ifemu ayikhange ithethe nto ngalo msitho. Nangona kufanelekile ukuba silwazi olu lwazi kungekudala. Ucinga ntoni ngolu luhlu luphakathi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi 8 SE: Uluhlu oluphakathi oluphefumlelwe sisiphelo esiphakamileyo
IXiaomi Mi Band 3: Isizukulwana esitsha sezacholo ngoku sisemthethweni
I-MIUI 10: Ulwahlulo olutsha lweXiaomi lulapha